Sombulula Iingxaki Zikhulu Kakhulu NgeTogaf Training Course - ITS Tech School
Sombulula Iingxaki Zikhulu Kakhulu Nge-TOGAF Training Course
Amaphuzu avela kwiTogaf:
Indlela yokufumana ubungqina ngeTogaf:
I-TOGAF® isiye isatifiketi se-defacto kwi-Architects yokudibanisa ne-IT. Amanani athetha ngokwabo ngokunyuka kwenani labantu abaqinisekisiweyo unyaka wonke kulo lonke ihlabathi. Ingumfanekiso we-"I-Structured Architecture Framework" - yindlela yokwenza umsebenzi we-EA kunye nesakhelo sokwenza umsebenzi we-EA kwaye isetyenziswe ngokupheleleyo uninzi lwabaqeqeshi be-IT kunye nabacebisi kwimibutho eyahlukeneyo. Umzimba wolwazi uncedo kakhulu kwaye kufuneka ube nalo naluphi na udidi lwezobugcisa be-IT kwaye lubeka isiteji impumelelo ngokuguqulwa kwamashishini. Qinisekisa ukuba abantu abajongene namaphulo anjalo baqonda imiba yenguqu apho ukuhlanganiswa kwabantu, inkqubo kunye neeteknoloji kwizakhono ezifanelekileyo zinokuqinisekisa ukuphumelela okuqhubekayo.ISiseko se-TOGAF® 9.1 (iNqanaba 1) &I-TOGAF® i-9.1 eqinisekisiwe (iNqanaba 2)Uqeqesho IziCwangciso zeNkcazo zeNnovative Isisombululo esihle kakhulu kwiCandelo loQeqesho kunye namaCandelo okuQeqesha kakuhle eGurgaon kwaye ihamba ngaphesheya kwe-Indiya.
UbuGcisa kunye neNzululwazi yilezivili ezenza intlangano yakho iqhube phambili xa ibhalansi. Yiyiphi ibhalansi eyiyo ukuba basebenze ngenhlangano yakho? Ungayilinganisa njani kwaye ngexesha elifanayo ngelixa uphumelela kwiziphumo zoshishino, utshintsho kunye nokulula ukulungelelanisa iinjongo zakho ze-IT ngendlela efanelekileyo. Iworkshop iya kunceda umntu aqonde indlela yokuzibandakanya ezi zinto zimbini kwiinkalo.
Ukuchaza i-TOGAF: I-TOAFAF njengesikhokelo singachazwa ngokufutshane njengendlela yokuncedisa umntu ukulawula ubugcisa bakho ngelixa usuka kwi-AS IS TO BE state. NJENGOBA ingaba nantoni na inkqubela phambili evela kwiindawo zakho zangoku ze-IT. Uza kuba naphi na ekuhambeni kweshishini lakho ukufezekisa iinjongo zakho kunye nendlela oya ngayo ekufumaneni khona konke ukunyamekela nokungakhathaleli iliso kwizinto eziphambili kunye neendleko.
Kuyaziwa ngamava akukho nanye isiliva yesiqhelo kwi-IT utshintsho, umthengi ngamnye unokuthathwa njengoluhlolo lwangalo ngokwalo. Inkulu kwipotfoliyo, kunzima kunokuba ibhatyi ngqo ngqo kwiqela. Amava avela ngokuhamba kunye nomthengi. Togaf Training Ukuqeqesha amaqela amaninzi aza kubangela iworkshop eqinisekisiwe evela kwi-Eturnti Enterprise Consulting kunye neengqungquthela zethu zokuvuma.TOGAF ubonisa abakhi bezakhiwo kwiinkqubo ezivuthiweyo eziye zazisebenzisa njengendlela evivinywe ngayo kwaye ifunyenwe ixabiso. Uninzi lweenkampani kwiluhlu lwamatye alusebenzise ngokubanzi ukulungelelanisa ukulandelelana kwazo nokuxazulula iingxaki zabo, imiba.
Emva kokuthatha ikhosi Togaf Uqeqesho, Uya kuba ne-ablility ukuxuba ubuchule bokuthi ulwabiwo-mbhalo luhambelana njani nalo. Uncedo kakhulu kwisisombululo somakhi, umakhi wezoshishino njengoko uhamba kunye nendlela yakho yomsebenzi kunye nendlela yokusebenzisa isakhelo se-Togaf ye-EA ekusebenzeni. Ulwazi olusebenzayo lwe-TOGAF 9.1 luyakukunceda ukucima isatifikethi se-TOGAF kwaye ube ngu-Architect Certified Certified TOGAF. Uphononongo lwetyala luya kuhamba ngekhosi eyokukunceda ukuba usebenzise i-TOGAF 9.1 kwintlangano yakho
Ucwaningo lwetyala luya kuqhutywa kulo lonke ikhosi ukuze lidibanise imixholo yemibandela yobomi benene efana neepuzzles, i-crosswords kunye nemibuzo ngaphandle kwexesha leemisebenzi zebhokisi ukuphindaphinda ukufunda ngexesha leeseshoni ukwenza indlela yokufumana amava okufunda.
Ku-Togaf Ukuqeqeshwa Ipesenteji yokupasa kwabaviwa sele iphakamileyo kwaye iimvavanyo ezininzi ezihlekisayo kunye neeseshoni ezisebenzayo ziya kumnika umviwa ukuba alungiselele kakuhle ukucima isatifikethi ngokuzithemba.